chhalphal News - घरेलु सामग्रीबाट सजिलै भाग्छन कक्रोच, हेर्नुहोस कसरी ?
घरेलु सामग्रीबाट सजिलै भाग्छन कक्रोच, हेर्नुहोस कसरी ?
शुक्रबार, ३० चैत २०७४, १० : ४२
काठमाडौ । वर्षातको मौसममा घरमा ओसको मात्रा बढ्ने गर्छ, त्यसैले पनि यो कक्रोच साङ्ग्लाका लागि निकै अनुकुल मौसम हो । किचन र स्टोररुममा कर्कोचले हैरानै बनाउने गर्छ । बजारमा कर्कोच भगाउने कैयन उत्पादन पाइन्छन्, तर यस्ता रासायनिक औषधिहरुको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुनसक्छ । अझै तपाईंको घरमा साना बच्चा छन् भने, रासायनिक औषधि होइन, घरेलु उपाय नै अपनाउनुस् । आज हामी तपाईंलाई कर्कोच भगाउने घरेलु उपाय सुझाउँदैछौं ।